မန်းရွှေစက်တော်က တည်းခိုခန်း(တည်းကျောင်းခ)တွေ ဈေးကြီးသနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မန်းရွှေစက်တော်က တည်းခိုခန်း(တည်းကျောင်းခ)တွေ ဈေးကြီးသနော်
မန်းရွှေစက်တော်က တည်းခိုခန်း(တည်းကျောင်းခ)တွေ ဈေးကြီးသနော်
Posted by winkyawaung on Mar 6, 2012 in Myanma News | 14 comments
မန်းရွှေစက်တော် ဂေါပကများ သိပါစေ
၂-၃-၂၀၁၂၊(သောကြာနေ့) တောင်သူလယ်မားနေ့ မှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်က မန်းစက်တော်ရာ ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်သို့ ဘုရားဖူးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့များ ရုံးပိတ်ရက်(၃)ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ဘုရားဖူးများ အလွန်များပြားစည်ကားနေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဘုရားပွဲတော်ကြီးက တပို့တွဲလဆန်း(၅)ရက်မှ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလ သင်္ကြန်အပြီး မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့အထိ ရက်ရှည်ကျင်းပတဲ့ မြန်မာပြည်က သမိုင်းဝင်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မန်းစက်တော်ဘုရား ပွဲတော်မှာ ၀ါးခင်း၊ထရံကာ၊သက္ကယ်မိုးများနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ သီးသန့်လုံးချင်းတည်းခိုဆောင်များနဲ့ တည်းခိုဆောင်( ဒေသအခေါ် တည်းကျောင်း) များရှိပါတယ်။ အဲဒီတည်းခိုခန်း (၁၁)ခန်းတွဲ တစ်တွဲစီကို တည်းခိုဆောင်တစ်လုံး အဖြစ်သတ်မှတ် နေရာချထားပြီး ဆောက်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခန်းလျှင် လူ ခုနှစ်ဦးခန့်သာ အိပ်စက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတည်းခိုခန်း(၁)ခန်းကို ငှါးရမ်းခက ပုံမှန်ဈေးမရှိပါ။ တစ်ခန်းငှါးရမ်းခ(တစ်ညအိပ်)တစ်ရက်၊ ဈေးနှုန်းများမှာ ကြိတ်နှုန်း(၁၀၀၀၀ိ) တစ်သောင်းခန့်သာ ရှိကြောင်း ကြားသိရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမစည်တဲ့ (ကြားရက် ရုံးဖွင့်ရက်)တွေမှာ (၅၀၀၀ိ) ငါးထောင်ခန့်ဖြင့်လည်း ဈေးလျှော့ပြီး ငှါးကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ ရုံးပိတ်ရက်(၃)ရက်မှာတော့ ` အမတို့က ရန်ကုန်ကလာကြတာပါ။ ဒီတစ်ခန်းကို တစ်ညအိပ် တစ်ရက် (၆၀၀၀၀ိ) ခြောက်သောင်းကျပ်ပေးရပါတယ်၊ ဒါက ရက်ကြိုတင်ငှါးထားလို့ရတာပါ။´လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ `အကိုတို့က မြင်းခြံကလာပြီး ဘုရားဖူးကြတာပါ။ လူ(၁၅)ယောက်လာပါတယ်။ တည်းကျောင်း (၂)ခန်းငှါးထားပါတယ်။ တစ်ခန်းကို (၈၀၀၀၀ိ) ရှစ်သောင်းကျပ်ပေးပြီး ယနေ့ ငှါးထားပါတယ်။ မနက်ဖြန် နံနက်ပိုင်း ပြန်ကြမှာပါ´၊ဘုရားဖူးလာကြရတာ လမ်းကြေး၊ တံတားကြေး စရိတ်စကတွေက ဈေးတော်တော်ကြီးနေပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ပွဲတော်အ၀င်ဂိတ်က တစ်ထောင်ကျပ်တောင်းပါတယ်။ ကားလေးတစ်စီး နှစ်ထောင်ကျပ် တောင်းလို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။´လို့ ဘုရားဖူးအမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောဆိုလို့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
`ယခုလို ရုံးပိတ်ရက် ရက်ရှည် ရက်များနဲ့ (၁၀)တန်းစာမေးပွဲ ပြီးတဲ့ရက်တွေမှာ ဘုရားပွဲတော်အ၀င်ဝကနေ စောင့်နေကြတဲ့ (ရွှေကြို) လို့ခေါ်တဲ့ ဧည့်ကြိုအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ သူတို့ အဖွဲ့တွေက တည်းခိုခန်း တစ်ခန်းကို (ငွေတစ်သောင်းကျော်လောက်) နဲ့ ဈေးနှုန်းဖြတ်ပြီး တည်းကျောင်းတွေကို ကြိုတင်ဝယ်ယူထားကြပါတယ်။ သူတို့က ယခုလို ဘုရားဖူးစည်ကားတဲ့ ရက်တွေမှာ ရိုက်စားလုပ်ကြတာပါ။ အချို့တည်းခိုဆောင်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ အဲဒီရွှေကြိုတွေကို အများကြီးမွေးထားပြီး ရာခိုင်နှုန်းစားတွေ နဲ့ ပေးပြီး ဈေးနှုန်းတွေကို ရရင် ရသလို တောင်းဆိုယူကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဘုရားဂေါပကတွေကလဲ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယခုတည်းခိုဆောင် (တည်းကျောင်း) ပိုင်ရှင်အများစုက ဒီမြေနေရာနဲ့ အဆောက်အဦးများကို သူတို့နာမည်နဲ့ ရထားကြသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာဆီကနေ မြေနေရာနဲ့ အဆောက်အဦး လေလံများကို အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့စာရင်းပြပြီး ရယူထားကြသူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လေလံရထားသူတွေဆီကမှ တစ်ဆင့်၊ နှစ်ဆင့်၊ သုံးဆင့် အမြတ်ယူပြီးရောင်းစားလိုက်ကြတာ (၁၁)လုံးခန်းပါတဲ့ တည်းခိုဆောင် တစ်ဆောင်ကို ငွေကျပ်သိန်း(၆၀)ခန့် အထိ ယခုနှစ်ပေါက်ဈေး ဖြစ်သွားပါတယ်။ မူလ အရင်းကျတဲ့ဈေးက (၃၅)သိန်းခန့်သာ ပေးရတာပါ။ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေလဲ ဒီလိုပါဘဲ၊ မြေနေရာနဲ့ဆိုင်ခန်း(၆)ပေအကျယ်ရှိ ဆိုင်ခန်းတွေကို ယခုနှစ်ပေါက်ဈေး(၁၀)သိန်းခန့်နဲ့ တဆင့်ဝယ်ပြီး ဈေးလာရောင်းတဲ့ဆိုင် တွေကများကြပါတယ်။မူရင်းဈေး ဆိုင်ခန်း(၆)ပေအကျယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း(၁)ခန်းမှာ ငွေကျပ်တစ်သိန်းကျော်သာ ကုန်ကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲတော်ကို အမြဲတန်းလာပြီး အမှန်တစ်ကယ် လုပ်ကိုင်နေကြသူဈေးသည်တွေကိုသာ ဘုရားကြီးအလှူငွေများလည်းရအောင် သင့်တင့် တဲ့ ကြမ်းခင်းလေလံဈေးနှုန်းများနဲ့ အပြိုင်ဆွဲလို့ ရစေချင်ကြပါတယ်။ ယခုလို တဆင့််ခံ အမြတ်ယူရောင်းစား နေကြတော့ အစစအရာရာမှာ ဈေးတွေကြီးကုန်တာပေါ့။ ဈေးဆိုင်ခန်းများ၊ တည်းကျောင်းမြေနေရာနဲ့ ဆောက်လုပ်ခ လေလံဈေးတွေ ကြီးတော့ ဘုရားဖူးလုပ်သား ပြည်သူတွေရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကို ရောက်လာပြီး တည်းကျောင်း တစ်ခန်း(၆၀၀၀၀ိ/၈၀၀၀၀ိ) ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ..။´ ဒီလိုမျိုးတွေ အများပြည်သူတွေအပေါ်ကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ခေတ်စနစ်နဲ့ အညီ လိုအပ်တာများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါပြီ ..။´ လို့ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်မှာ နှစ်ပေါင်း(၂၀) သက်တန်းကြာအောင် ဈေးရောင်းချလာတဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ်သို့ ပြောဆိုလို့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၀) မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်တွင် ပြင်ဆင်၍ ဖော်ပြထားပါသည်။
၇-၃-၂၀၁၂ နေ့ထုတ် မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၀) မှ စာမူအား ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ဂေါပက ကသိတာပေါ. ၊ ဘယ်တော.မှအရေးမယူဘူး ။
လွန်ခဲ.တဲ. ၁၂ နှစ်ကျော်တုန်းကတောင် ၇၀၀၀ လောက်ပေးရတယ် ။
တစ်ရက် ၈သောင်း အသာလုပ်ပါဗျာ
၁.၃.၂၀၁၂ တွင် မဒမ်ပေနှင့် သူ့ အမ မိသားစု ရွှေစက်တော် ဘုရားဖူး သွားရာ ၊ လူ၁၀ယောက်ခန့် လဲလျောင်းနားနေလို့ ရသော ၊ ထရံကပ်တဲတစ်လုံး ကို တစ်ရက် သုံးသောင်းကျပ် ပေးနေခဲ့ကြောင်း ပါ ခင်ဗျ ။
ကိုဝိုင်းကြည်အောင်ရေ မကွေးကိုလာမယ်။ပြီးရင် ရွှေစက်တော်သွားမလို့ စီစဉ်ထားတာ
ကုန်မယ့်ငွေ မနည်းပါလား။တည်းကျောင်းတွေ တော်တော်ရိတ်လာပီဘဲ။
မလွယ်ပါလား အရပ်ကတို့ရေ …
တစ်ခန်းငှားခ ကို ခြောက်သောင်း၊ ရှစ်သောင်း … တဲ့။
တကယ်ဆို ဘုရားဖူး လာတဲ့ လူတွေအပေါ် အဲလို မလုပ်သင့်တာ အမှန်ပါပဲဗျာ … ။
တရက်ကို နှစ်ထောင့်ငါးရာကျပ်သာ ယူဘို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ တည်းခိုခန်း နှစ်ယောက်ခန်းကို
ဒီနှစ် 7rh January မှာ တစ်သိန်းကျပ်ပေးရပါတယ်။
၀ိသမနဲ့ ဂေါပက ကြား ဘာဆက်သွယ်မူ့ရှိနေသလဲ ကိုဝင်းကျော်အောင်ရေ။
ဒါ မကွေးက မီဒီယာအဖွဲ့မှာ သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့် တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကိုပေါက်ရေ ကျနော်လဲ လာမယ့်အပတ်ထဲရွှေစက်တော် ဒိုးမယ်ဗျို့ ။
မကွေးသတင်းလေးတွေ ကြားရတာပေါ့။ကျနော်လဲ ဒီပို့ စ်ရှင်
ကိုဝိုင်းကြည်အောင်နဲ့ တော့ တွေ့ ချင်သားဗျာ။
ဘုရားဖူးများခင်ဗျာ..။ ရွှေစက်တော်မှာ ညမအိပ်ဘဲ မင်းဘူး စက္ကိန်းတဲဘုရားနဲ့ မကွေးမြသလွန်ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်မှာ အခမဲ့ တည်းခိုရန် တိုက်များရှိပါကြောင်း မင်္ဂလာသတင်းကောင်း..။
မန်းရွှေစက်တော်ကိုသွားရင် ၀က်မြစ်ဥ ၀ယ်ခဲ့ကြပါလားဗျာ……… သိပ်ကောင်းတာ…..စိမ့်တယ်……… တည်းခိုစရိတ်စကကြီးတာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီဗျာ………… ခေတ်ကာလာကြီးကလဲ မကောင်းဘဲကိုးဗျ…….. ဘုရားတောင် ငွေလမ်းခင်းဘူးမျှော်နေကြရတာ………တကယ့်ကို ပျက်ကပ်ကြီးပါဗျာ………
အခန်းခတွေက တော့ Supply and demand .
ခေတ်နဲ့ အညီ ဈေးကွက် စီးပွားရေးလေ .. လူများများလာရင် များများတောင်းမှာဘဲ. :grin:
အဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် သာ ဘယ်လိုပေးလည်း ထောက်စရာပါ….
အင်း အဲလိုဆိုရင်တော့ ကျိုက်ထီးရိုးနဲ့အပြိုင် ဘုရားပွဲချိန်ဆိုတော့လည်း ဈေးကွက်စီးပွားရေးရှာတာနေမှာပေါ့နော်။ မနောတို့က သွားဖူးတိုင်း အဲလိုအခန်းလေးတွေမှာ တည်းချင်ပေမယ့် မတည်းရတော့ ဈေးနှုန်းတွေ ဘယ်လောက်ဆိုတာ မသိဘူး။ ခုမှပဲသိတော့တယ်။